Waxaan muuqaal ahaan kuugu soo bandhigeynaa dhammaan wararka watchOS 5 | Wararka IPhone
Sidii aan ku sameynay waqtigaas macruufka 12, hadda waa inaan soo bandhignaa dhammaan wararka watchOS 5 ee fiidiyoowga ah. Nidaamka cusub ee ay ku shaqeynayso shirkadda smart watch wuxuu la yimaadaa astaamo badan oo cusub, maaddaama aysan isku mid ahayn inaad u aragto sida la rabo in loo sheego, waxaan kuu daayey fiidiyowgeena. Waa habka ugu fudud ee lagu ogaan karo wax kasta oo la soo bandhigay iyo wixii ka sarreeya oo dhan si aad u awoodo inaad naftaada u aragto haddii ay runti mudan tahay cusbooneysiinta ama haddii ay liddi tahay ay tahay mid ka mid ah munaasabadahaas oo aan doorbideyno inaan sugno nidaamka qalliinka la safeeyey. Waxaan kaa dhigi doonaa a Baabbi'iyihii, watchOS 5 wax weyn ayey qabaneysaa.
Kuwani waa soo koobay warka watchOS 5:
Layli: Hadda dalabka si aad u yar ayaa dib loo naqshadeeyay, wuxuu noo oggolaanayaa inaan abuurno nidaam tartan ah oo noo oggolaanaya inaan abuurno miisaska dhibcaha sidaasna saaxiibbadayada uga dhex abuuraan jarjar caafimaad leh.
Waxaan tababbaraa: Hada arjiga tababarka wuxuu awoodi karaa inuu kaligiis ogaado marka aan sameyneyno tababar adoon ubaahneyn inaanu sii hagaajino arjiga horay, nooga badbaadiyo waqtiga iyo waliba inuu waayo tababbarkii maxaa yeelay waxaan ilaawnay inaan bilowno.
Siri iyo toobiye: Nidaamka toobiye wuxuu si buuxda ugu yimaadaa daawashada 5, si la mid ah sidii uu Siri hadda u helay caqli badan oo markaa naga dhigi kara talooyin ku habboon oo ka kooban.
Walkie-Talkie: Xal duug ah oo loogu talagalay badeecad cusub, waxaan awoodi doonnaa inaan u dirno farriimo cod gaagaaban isticmaale kasta iyada oo loo marayo makarafoonka saacaddeenna casriga ah, oo aan fiicnayn.
podcast: Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan dhageysano podcadka aan soo dejisanay anaga oo aan haysan iPhone.
Kuwani waa qaar ka mid ah wararka ugu muhiimsan, iyo sidoo kale naqshadaynta arjiga Neefsasho, liiska qaybaha cusub iyo dabcan ku habboonaanta waxqabadka heer guud oo ay bixiso Apple Watch. Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay fiidiyowgeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Waxaan fiidiyow kugu tusineynaa dhammaan wararka watchOS 5
Laakiin shaqada Walkie-Talkie ee Iphone 6 Plus IOS 12 oo leh taxanaha Aplle Watch 1 OS 5, kama muuqaneyso barnaamijka Watch ee mobilka, ama Watch laftiisa
Waxaan haystaa iphone 8 oo leh ios 12 iyo tufaax taxane 3 ah oo leh os 5 mana helayo walkie-talkie sidoo kale ...
Ku jawaab Pol